-ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဆာဆာ ယူကေနဲ့ အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မြန်မာ့အရေးတွေ… – PVTV Myanmar
-ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဆာဆာ ယူကေနဲ့ အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မြန်မာ့အရေးတွေ…
-ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဆာဆာ ယူကေနဲ့ အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မြန်မာ့အရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေ
-မြန်မာနိုင်ငံအရေးပေါ်ဆေးပညာအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခဒေါက်တာမော်မော်ဦးကို လွှတ်ပေးဖို့ နိုင်ငံတကာ အရေးပေါ် ဆေးပညာရှင်တွေက တောင်းဆို
-စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး နှိပ်စက်ရိုက်နှက်ခဲ့မှုကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုဇင်ကိုထွန်းအတွက် ဝမ်းနည်းဂုဏ်ပြုကြောင်း သဝဏ်လွှာပေးပို့
-ပြည်မြို့ အခြေစိုက် DVB သတင်းထောက် ကိုမင်းညိုအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ပြစ်ဒဏ်ကို ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့တောင်းဆိုစတဲ့ PVTV ရဲ့ ညနေပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 12K Share – 1624
“ကယ်တင်ရှင်ဘယ်သောအခါမှမရှိ” ဆိုတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က သပိတ်
လေပြေညို(ကလေး)ရေးသားပြီး ကျော်နွေဦးခံစားရွတ်ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ဆိုတဲ့ကဗျာကို ခံစားနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
2021-05-14 at 6:33 PM
Mindat needs help. What have NUG done to help them? Not even supplying weapons?
2021-05-14 at 6:37 PM
Sir. Where is R to P Burma people especting for?
Kzy Mg Thaik says:
2021-05-14 at 6:48 PM
ထိုက္ ဦး says:
2021-05-14 at 6:57 PM
– ကျ​​နော်တို့ ဘာမှန်းမသိတဲ့
၇၂ နာရီ ဆိုတာကြီးကို ယုံခဲ့တယ်။
UN ကား​တွေ​ မျှော်ခဲ့တယ်။
– UNSC ​က ဘာ​ပြောပြီ။
– ဘိုင်ဒင် ရာဇသံ​​​ပေးပြီ
– အာဆီယံမှာ ကားမှာ​​တောင်အလံမ​ထောင်ရပြီ
…. ဆိုတဲ့ အရည်မရ အဖတ်မရ
like ခြူပိုစ့်​တွေနဲ့ သာယာ​နေခဲ့ချိန်မှာ
ပြည်သူတွေ အများကြီး သေကုန်ပြီ။
ပြည်သူတွေ အများကြီး အဖမ်းခံရကုန်ပြီ။
ပြည်သူတွေ အများကြီး ဘဝတွေပျက်ကုန်ပြီ။
– ငွေ​တွေ တန်းစီ ထုတ်တာ​တောင်
– အရင် credit-card/MPU/Mobile Banking
-​ စျေး​တွေ တက်တယ်
အဲ့ချိန် ဆိုက်ဝါးလား ခွဲမရတဲ့
ခရိုနီတွေဟာ ကယ်တင်ရှင် မဟုတ်ပါဘူး။
အခု စစ်ဓားပြတွေ စီးတာ
ဘယ်နှစ်လမှ မရှိသေးခင် …
မြေတွေ အသိမ်းခံရသူတွေ ဒုနဲ့ဒေး၊
ငွေတွေ အလုခံရသူတွေ ဒုနဲ့ဒေး၊
အကုန် လုယက်ဖျက်ဆီး ခံနေကြရပြီ။
နိုင်မှကို ဖြစ်တော့မှာ …
ဘယ် UN US မှလည်း မျှော်မနေ ပင့်မနေနဲ့တော့။
တအားကို နှမျောဖို့ ကောင်းတယ်ဗျာ။
2021-05-14 at 7:10 PM
တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဂျီဇက်တွေမှာ လက်နက်လိုအပ်တာအမှန် ဥပမာ မင်းတပ်
2021-05-14 at 7:16 PM
စည္းလုံးမူျဖစ္ ဆက္လက္ေတာ္လွန္က ေအာင္ျမင္မူကုိရယူၾကပါစုိ႔
ထြန္း ဦး says:
2021-05-14 at 7:19 PM
Min Zayar Tun says:
2021-05-14 at 7:20 PM
ကျဆုံးလို့မသုံးပါနဲ့ အသက်ပေးတို့ ကြွေလွှင့်တို့သုံးပါ
2021-05-14 at 7:21 PM
လူတွေငွေသားကိစ္စတိုင်ပတ်အောင်လုပ်တဲ့ အကြောင်း ဖော်ထုတ်ပေးပါအုံး၊ လူတွေ အသိပညာရအောင်
CungLian Aung says:
2021-05-14 at 7:24 PM
တွေ့ဆုံနေလိုက် တောင်းနေလိုက် 😷
Sein Eu says:
2021-05-14 at 7:38 PM
လ ေရာင္ says:
2021-05-14 at 7:39 PM
စစ္​ေ ကာင္ စီ လို ဘာ လို​ေ ခါ တာ လဲ က​ြာ အ ျက မ္း ဖက္ စစ္​ေ ကာင္ စီ လို ​ေ ခါ ​ေ လ က​ြာ
မ ဟာ says:
2021-05-14 at 8:17 PM
Kar Yan Cho says:
2021-05-14 at 8:59 PM
သတင်းကြေငြာတဲ့ အသံ သြဇာ ကတော့ ရှယ်ပဲ ဗျာ။ ဟို ဖာသာသာဌာန တွေရဲ့ ပြာတာတာ တွေ နဲ့ တော့ ကွာပါ့။
Djcross Mdy says:
2021-05-14 at 9:18 PM
2021-05-14 at 9:20 PM
Nang Khual says:
2021-05-14 at 10:23 PM
Such precious peoples are detained. So sad and shameful Coup😪
Ba Gan says:
2021-05-14 at 10:36 PM
Phyo Koko says:
2021-05-14 at 11:48 PM
ေတာ္ဝင္ ေတာ္ဝင္ says:
2021-05-15 at 2:20 AM
ေရႊျပည္ သစ္ says:
2021-05-15 at 9:39 AM
ေလဆာ သြားတိုက္ေဆး ေလဆာေရာင္ျခည္ပဲ ၾကားဖူးတယ္ ခုမ လူေလဆာ ၾကားဖူးတယ္ ေျပာလိုက္ရင္ ေလႀကီးေလက်ယ္ မင္းလုပ္ေနတာေတြ အေျပာပဲ ႐ွိတယ္ လက္ေတြ႕ဘာမ ျဖစ္မလားဘူး
ခုေတာ့ မင့္နာမည္ ေလဆာ ျဖစ္ေနဘီ
Aùñĝ Ĺŵïm Ñàý says:
2021-05-15 at 10:09 AM
Daw Thi Dar Oo says:
2021-05-15 at 11:29 AM
2021-05-16 at 11:29 AM
2021-05-16 at 11:52 AM
Chomar Lwin says:
2021-05-16 at 5:04 PM
Soe Aung says:
2021-05-17 at 8:08 PM
ခွေးက လူလိုနားမလည်တော့ တောင်းလို့ရမှာမဟုတ် တိုက်မှရတော့မယ်ဆိုဒါ သိလောက်ပါပြီ
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) အစိုးရအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် ပတ…
ဒီတစ်ခါတော့ နိုင်ကိုနိုင်ရမည် . . . ဟေ့ – သီချင်း…